tononkalo malagasy – Blaogin'i Voniary
Étiquette : tononkalo malagasy
Takelaka Tsara Soratra 003 : Ny fitiavana raha tantaraina, ny fitiavana raha ventsoina
Ambetin-dresaka ny FITIAVANA tamin’ity Takelaka Tsara Soratra indray mitoraka ity. Efa hatramin’ny fahagolan-tany tokoa no nampikorina ranomainty ny fitiavana ary tsy ambakan’izany ireo nanolotra ny asa sorany hoankafizin’ny mpamaky ato amin’ity revio ity. « Tsy tantara ny tantara raha tsy ilafihan’ny fitiavana » hoy E.D. Andriamalala andrarezin’ny tantara foronina Malagasy, izay vao feno 100 taona tamin’ny 22... Lire la Suite →
Hotanterahina ao amin’ny TAHALA RARIHASINA izy io ny 6 hatramin’ny 9 Desambra ary hofaranana amin’ny sakafom-pifaliana ao amin’ny HAITSIRON’IARIVO ny 10 Desambra. Toy izao àry ny andinindininy momba io hetsika io. MIFANDRARY FITIA Io no lohatenin’ny amboaran-tononkalo nosoratan’i Felana RAVELOARISON na Felana izay havoaka manokana amin’ity fankalazana ny faharoapolo taona ity. Raha tadidintsika efa namoaka ny... Lire la Suite →